Shirkii saddex geesoodka ahaa ee Bahar Dar oo bayaan laga soo saaray - Halbeeg News
BAHAR DAR( HALBEEG)- Shirkii saddex geesoodka ahaa ee madaxda Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Bahar Daar ee dalka Itoobiya iyadoo madaxdii ka qeyb gashay shirkaasi ay kasoo saareen war murtiyeed mideysan.
War murtiyeedkan wadajirka ah ee shirka laga soo saaray ayaa lagu sheegay in shirkan lagu hubinayay dhaqan gelinta shirkii hore ee ay madaxda saddexda dal ku yeesheen Eritrea.
War murtiyeedka ay soo saareen madaxda ayaa sidoo kale lagu xusay adkeynta iskaashiga dhaqaalaha saddexda dal iyo isku xirka dhinacyada amniga iyo siyaasadda.
Madaxda saddexda dal ayaa si weyn u adkeeyay una taageeray qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya iyagoo amaanay horumarka ay Soomaaliya ku tallaabsatay muddooyinkii u dambeeyay.
Madaxda sadexda dal ayaa si diiran u soo dhoweeyay cunaqabateynta oo laga qaado dalka Eritrea ay kaalin ka qaadan doonta xasiloonida iyo horumarka gobolka.
Madaxda dalalka Eritrea iyo Soomaaliya ayaa Raiisul wasaare Abiy Axmed iyo shacabka Itoobiya uga mahad celiyay soo dhoweyntii diiraneyd ee ay u fidiyeen iyo booqashadii magaalada taariikhiga ah ee Gondar iyo Bahar Dar.
Dhanka kale war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa lagu sheegay in kulanka xiga ee saddex geesoodka ah lagu qaban doono magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.